Onodu aku na uba nke Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Free | Martech Zone
Ego nke Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Na-adịghị Eke
Tuesday, February 21, 2012 Tuesday, February 21, 2012 Adam Obere
Ndị ụlọ ọrụ na-eleba anya na ịmalite mmemme mmemme na ngwa mkpanaka nke na-aja ọrụ ha mma; agbanyeghị, a na-eleghara ngwa ọdịnala n'efu anya dị ka ihe ọzọ nwere ike ịgbanwe.
Fredị azụmahịa freemium na - ewere - atụmatụ 65% nke ego ha nwetara site na ngwa ngwa 100 kachasị na Storelọ Ahịa App, na atụmatụ 72% nke ngụkọta ngwa ahịa Store na-abịa site na egwuregwu freemium mobile. In-game ịzụrụ dị ka amara ndụ, pụrụ iche ike, mebere ngwongwo na personalizations na-akwọ ụgbọala na revenue. Site na Na-agbanwe
Kedụ ụdị egwuregwu ụlọ ọrụ gị nwere ike ịzụlite nke ga-eme ndị ọrụ mkpanaka obi ụtọ ma soro ha rụọ ọrụ, na-enye gị ohere ịkọrọ ha nke ọma gbasara ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị?
Ihe omuma nke ahia ahia
Wzọ 22 iji mepụta ọdịnaya dị egwu